ကာတွန်းကြိုက်နှစ်သက်သူများ MPT နဲ့ Putet ပူးပေါင်းထားတဲ့ MPT Books ကာတွန်းပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်ဖတ်ရှုနိုင်ပြီ | Myanmar Tech Press
2019-05-22 2019-08-09 Admin MPTBOOKS, PUTET
အရင်တစ်ပတ်က ဝေမျှပေးလိုက်တဲ့ ပုတက်ကာတွန်းကို ဖတ်ရှုလိုချင်သူများအတွက် MPT နဲ့ Putet တို့ ပူးပေါင်းတက်ဆက်လိုက်တဲ့ ပူတက်ကာတွန်းတွေကို MPT Books မှာဖတ်ရှုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။MPT-KSGM Joint Operations ၏ Chief Commercial Officer ဖြစ်သူ Mr. Reizo Umeda က “ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ MPT Books အစီအစဉ်ကို စတင်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ကတည်းက စာဖတ်သူတွေရဲ့ အားပေးမှုဟာ အလွန်ပဲအားရစရာကောင်းခဲ့တာကြောင့် MPT အနေနဲ့လည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင်းက နာမည်ကြီးတဲ့ စာရေးဆရာတွေ၊ ကာတွန်းတွေ၊ မဂ္ဂဇင်းတွေနဲ့ ဂျာနယ်တွေပါဝင်တဲ့ နိုင်ငံရဲ့ အကြီးဆုံး ဒီဂျစ်တယ် စာကြည့်တိုက် တစ်ခုသဖွယ် ဖြစ်လာဖို့ ရည်မှန်းချက်ထားကာလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ အခု MPT နဲ့ ပုတက်ရဲ့ ပူးပေါင်းတင်ဆက်မှုတွေဟာ စာဖတ်ဝါသနာအိုးတွေအတွက် လိုအပ်ချက်တွေကို ထူးထူးခြားခြားဖြည့် စွမ်းပေးနိုင်မယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်ထားပြီး မြန်မာ့ဟန်ပန်ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှုတွေကို နှစ်သက်တဲ့ လူငယ်စာဖတ်သူတွေများစွာ အကြိုက်တွေ့မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားပါတယ်။” ဟုပြောကြားသွားခဲ့ပြီးနောက်MPT က ၎င်း၏ ebook ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်သော MTP Books အစီအစဉ်တွင် နာမည်ကျော် ကာတွန်းစာအုပ်ပေါင်း ၁,၀၀၀ ကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးနှင့် အကျယ်ပြန့်ဆုံးကွန်ရက်ပေါ်မှ ဖတ်ရှုနိုင်ရန်အတွက် ကာတွန်းလောကတွင် လူကြိုက်များသော မြန်မာ့ နံပါတ် ၁ ကာတွန်းစာအုပ်ဖြစ်သည့် ပုတက်ကာတွန်း နှင့် ပူးပေါင်းလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့ပါတယ။်. ပုတက်ကာတွန်းစာစောင်ကို MPT Books တွင် မေလ ၁၅ ရက်မှ စတင်၍ ဈေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့် ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ စာဖတ်ဝါသနာအိုးများအနေဖြင့် MPT Books ဝန်ဆောင်မှုကို ၎င်းတို့၏ ဖုန်းများ၊ တက်ဘလက်များ နှင့် ကွန်ပျူတာရှိ web browser များမှတစ်ဆင့် ဝန်ဆောင်မှု အက်ပလီကေးရှင်းကို ဒေါင်းလုတ်ရယူပြီး ငှားရမ်း၍ ဖြစ်စေ ဝယ်ယူ၍ ဖြစ်စေ ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် MPT Books တွင် စာစောင်များကို ငှားရမ်းဖတ်ရှုရန်အတွက် ငှားရမ်းခ ၁၀၀ ကျပ်မှ စတင်၍ ငှားရမ်းနိုင်ပြီး ၊ ဝယ်ယူဖတ်ရှုရန်အတွက် တစ်အုပ်ချင်းကို ၃၀၀ ကျပ်မှ စတင်၍ အသက်သာဆုံး နှုန်းထားများဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Photos Source- https://www.mpt.com.mm/mm/
“အခုလို ကာတွန်းဖတ်နှုန်းကျ နေတဲ့အချိန်မှာ MPT Books မှာပါ ဖတ်ရှုနိုင်အောင် ပူးပေါင်းစီစဉ်လိုက်တဲ့အတွက် စာဖတ်သူတွေအနေနဲ့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူ ဖတ်ရှုနိုင်ပြီး မြန်မာကာတွန်းတွေ ရေရှည်တည်တံ့နိုင်ဖို့အတွက် MPT Books APP က တစ်ထောင့် တစ်နေရာကနေ အထောက်အပံ့ကောင်းတစ်ခု ဖြစ်မယ်လို့လည်း ထင်ပါတယ်“ ဟု ပုတက်ကာတွန်း ၏ အယ်ဒီတာချုပ် ဦးအောင်ချစ်ခင်မှ လည်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
လတ်တလောအနေဖြင့် MPT Books တွင် စီးပွားရေး ၊ နည်းပညာ ၊ ဈေးကွက် ၊ အိမ်ခြံမြေ ၊ ကျန်းမာရေး နှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများ ပါဝင်သည့် ဂျာနယ်ပေါင်း ၂၅ စောင်နှင့် မဂ္ဂဇင်း ၂၇ အုပ် ကို ရယူဖတ်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ စာရင်းသွင်း ဖတ်ရှုလိုသည့် စာဖတ်ဝါသနာအိုးများအနေဖြင့် အဆိုပါ ဂျာနယ်နှင့် မဂ္ဂဇင်းများကိုနေ့စဉ်ဝန်ဆောင်မှု နှုန်းထား ဖြစ်သည့် တစ်ရက်လျှင် ၉၉ ကျပ်ဖြင့် ၎င်းတို့၏ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများမှ တစ်ဆင့် စာရင်းသွင်းဖတ်ရှုနိုင်ပြီး ယခင်ထွက်ရှိထားသော ဂျာနယ်/မဂ္ဂဇင်း အစောင်(၁၀၀) ကျော်ကိုလည်း ပြန်လည် ဖတ်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ပုတက်ကာတွန်းစာအုပ်နှင့် ပူးပေါင်းထားသော ယခုအစီအစဉ်တွင် စာဖတ်ဝါသနာအိုးများသည် နိုင်ငံတွင်းကျော်ကြားသော ကာတွန်းများကို MPT Books တွင် ရယူနိုင်ပြီး နာမည်ကျော် ကာတွန်းဆရာများရေးဆွဲထားသော ပုတက်စာစောင်များတွင် ကလေးဘဝက ကာတွန်းရုပ်ပြ သူရဲကောင်းများဖြစ်ကြသော တွတ်ပီ ၊ မောင်မောင်ဇာ ၊ သမိန်ပေါသွပ် ၊ ရွှေအိ နှင့် ရွှေဘုတ် ၊ ကိုတင့် နှင့် ဂျောက်ဂျက် အစရှိသော ကာတွန်းရုပ်ပြများကို MPT ၏ အကျယ်ပြန့်ဆုံး ကွန်ရက်မှ တစ်ဆင့် ဖတ်ရှုနိုင်မှာပါ။
MPT Books ကို https://books.mpt.com.mm/ လင့်ခ်တွင် ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အကောင့်တစ်ခုဖြင့် စာရင်းပေးသွင်းရယူထားသူများအနေနှင့် ဝန်ဆောင်မှုကို မတူညီသည့် device ၅မျိုး (မိုဘိုင်းလ် ဖုန်း၊ တက်ဘလက်၊ ကွန်ပျူတာ အစရှိသည်တို့) ပေါ်မှ တစ်ပြိုင်နက်တည်း ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုအသုံးပြုနိုင်ပြီး iOS များ နှင့် အန်းဒရွိုက်ဖုန်းများမှ လည်း ဝင်ရောက်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။စာအုပ်မျာကို ငှားရမ်းဖတ်ရှုလိုသူများ သို့မဟုတ် ဝယ်ယူလိုသူများ အနေဖြင့် ဝက်ဘ်ဆိုက် ( https://books.mpt.com.mm/ ) မှတစ်ဆင့် ဝင်ရောက်နိုင်သလို *7272# ကို ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့် SMS (စာတို) မှတစ်ဆင့် ဒေါင်းလုတ်လင့်ခ် ရယူနိုင်ပါတယ်။
MPT Books ဝန်ဆောင်မှု (သို့မဟုတ်) အခြားသောဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက သုံးစွဲသူ ဝန်ဆောင်မှုစင်တာ 106 သို့ ခေါ်ဆိုခြင်း (သို့) www.mpt.com.mm ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့် MPT ၏ တရားဝင်ဖေ့စ်ဘွတ်ပေ့ချ် https://www.facebook.com/mptofficialpage. နှင့် MPT Books ၏ တရားဝင်ဖေ့စ်ဘွတ်ပေ့ချ် MPT Books Facebook Page https://www.facebook.com/MTPBooks/ တို့တွင်လည်း ဝင်ရောက်လေ့လာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် https://www.putet.com.mm အမည်ဖြင့် အခပေး Website ကိုတည်ထောင်ခဲ့ကာ member card များ ရောင်းချ၍ website တွင် ကာတွန်းများ ဖတ်ရှုနိုင်ရန် Digital version များကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ (၇) တွင် Putet Mobile Application ကို ထုတ်လုပ်ဖြန်ဝေခဲ့ပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် Vietnam နိုင်ငံရှိ Silicon Straits Saigon မှ ရေးဆွဲပေးခဲ့ပြီး Revo Tech မှ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲပေးထားသော Putet World အမည်ဖြင့် Version အသစ်ကိုထုတ်ဝေဖြန့်ချိခဲ့ကာ ပိုမိုကောင်းမွန်သော comics application တစ်ခုဖြစ်စေရန် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
Putet Comics App ကို Google Play Store, www.putet.com.mm website တွင်လည်းရယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
← ယာဉ်မောင်းအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေဖို့ အထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့ Facebook Page များအကြောင်း
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံး နိုင်ငံအဆင့် စက်ရုပ်ပြိုင်ပွဲကျင်းပမည် →